कोरोना विशेष अस्पतालको आइसियुबाट संक्रमित बेपत्ता – Rajya TV
कोरोना विशेष अस्पतालको आइसियुबाट संक्रमित बेपत्ता
बुटवल,१२ पुस ।
बुटवल स्थित कोरोना विशेष अस्पतालबाट एक जना कोरोना संक्रमित बेपत्ता भएका छन् ।
कोरोना पुष्टि भएसँगै गत बुधबार अस्पतालको आइसियुमा भर्ना भएका बुटवल १३ का ५५ वर्षिया पुरुष आज बिहानबाट बेपत्ता भएका हुन् ।
पिशाव गर्न शौचालय गएका गएका ती संक्रमित शैचालयबाटै जङ्लतिर भागेको अस्पतालले पुष्टि गरेको छ । अस्पतालका कर्मचारी र कुरुवाहरुले केहिबेर पिछा गरेपनि राजमार्ग पार गरेर जङ्ल पसेपछि नियन्त्रणमा लिन नसकिएको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका प्रवक्ता डा. विष्णु गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
घटनाको बिषयमा अस्पताल प्रशासनले प्रहरीलाई जानकारी गराएको र उनको खोजिगर्नेे क्रममा योगी कुटी स्थित एक होटलमा पुगेर परिवारलाई फोन गरेको पत्ता लागेको अस्पतालले जनाएको छ ।
‘भर्ना हुने बेलामा नै परिवारका सदस्यले मानसिक रोगको औषधी सेवन गरिरहेकाले निगरानी गरिदिन अनुरोध गरे अनुसार उनलाई निगरानीमा राखिएको डा. गौतमले बताउनु भयोे । ‘बिहान ५ बजे सुरक्षाकर्मीहरुले आराम गरिरहेका बेला उनि जङ्लतर्फ लागेको अस्पतालले जनाएको छ ।
संक्रमितका आफन्तले भने अस्पतालको लापरवाहीका कारण उनी हराएको आरोप लगाएका छन् । आईसीयुमा भर्ना भएका संक्रमित पिशाव फेर्न बाहिर आउनै नसक्ने संक्रमितकी श्रीमतीले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो–‘बेडमा चढाईएको सलायन नफेरेर सबै रगत फक्र्यो, मलाई मार्ने भए, मलाई लिन आउ भनेर फोन आएको थियो, हामीले भोली डाक्टरसँग सल्लाह गरेर आउँछौं भन्यौं ।’ बिहान जादा बेपत्ता भएको थाहा पाएको संक्रमितकी श्रीमतीको भनाई छ ।
श्रीमानको मोबाईल नउठेपछि बिहान फोन गर्दा अस्पतालका कर्मचारीले आफुसँग झुठ बोलेको उहाँको दाबी छ ।